Inkabadan 40 Askari oo katirsan Nuseyriyada Oo lagu dilay Suuriya. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Mar 4, 2019 228 0
Dagaalyahanno katirsan jamaaco jihaadi ah oo lagu magacaabo Ansaaru-Towxiid ayaa howlgal qorsheysan waxay ka fuliyeen deegaanno katirsan gobolka Xammaah ee bartamaha Suuriya, halkaas oo uu gacanta ku hayo maamulka Nuseyriyada Bashaar Al-asad
Weerarka oo dhacay aroornimadii hore ee maalintii shalay oo axad ahayd , waxaa Inqimaasiyiin katirsan Ansaaru-Towxiid ay ku qaadeen labo aag oo ku yaala deegaanka Al-masaasina ee gobolka Xammaah, iyagoona wax dhintay iyo wax dhaawacmey ka dhigay ciidamadii joogay goobaha la weeraray.
Inta haatan la xaqiijiyay waxaa khasaaraha dhimashada ee nidaamku gaarayaa 40 askari oo ay kamid yihiin 18 sakraal, waxaana jira dhaawacyo kale oo aad u badan, kuwaas oo qaarkood halis ah, suuragalna ay tahay in saacadaha soo socda ay naftu sii deyso.
War kasoo baxay Jamaacada Ansaaru-Towxiid waxay ku xaqiijisay in qaar kamid ah dagaalyahannadeeda ay ku guuleysteen fulinta weerar qorsheysan oo laga gaaray hadafkii laga lahaa, islamarkaana lagu dilay 40 askari.
“Weerarkan wuxuu aargud u ahaa shuhadadeena iyo guud ahaan shuhadada muslimiinta Shaam, Inqimaasiyiintii fuliyayna iyagoo bad qaba ayay dib usoo laabteen” ayaa lagu yiri bayaanka kasoo baxay Jamaacada Ansaaru-Towxiid.
Wakaaladda wararka ee Nidaamka Nuseyiryada ayaa dhankeeda xaqiijisay in ciidamadooda jooga Xammaah ay la kulmeen weerar khasaare dhaliyay, iyadoona eedayn dusha kaga tuurtay jamaacaad ay ku tilmaamtay iney yihiin “Argagaxiso”.
Xilliga uu weerarku dhacay ayaa jawiga waxa uu ahaa mid degan, islamarkaana daruur ah, waxaana Nidaamka Nuseyriyadu sheegay in ragga weerarka soo qaaday ay ka faa’ideysteen fursadaas.
Dhinac kale, dagaalyahanno katirsan hay’adda Taxriiru-Shaam ayaa howlgal qorsheysan ka fuliyay deegaan katirsan gobolka Al-laadiqyah, oo kamid ah meelaha uu ka socdo halganka ka dhanka ah Nuseyriyada iyo Rawaafida.
Ugu yaraan 4 askari oo katirsan Nidaamka Bashaar Al-asad iyo sarkaal Iiraani ah ayaa la xaqiijiyay in lagu dilay howlgalkaas ay masuuliyadiisu sheegatay Taxriiru-Shaam oo kamid ah Jamaacaadka ugu tunka weyn ee ka dagaallama wadanka Suuriya.
Reer Suuriya, gaar ahaan kuwa degan wuqooyiga dalkaas ayaa aad ugu farxay howlgalladan lagu dhiig bixiyay Nuseyriyada, waxaana howlgalladan ay kusoo aadeen xilli mudooyinkii dambe ay yaraayeen weerarada ka dhanka ah Nidaamka Nuseyriyada.